Burmese taste - Iora: အဆင်ပြေသလိုလုပ်စားထားသောနံနက်စာများ (နံနက်စာများ..၃)
Posted by Iora at 1:15 AM
barbielay February 1, 2012 at 1:55 AM
Share me about 3rd last photo.Some of them are the same way of mine.I'll make Hta ma nhe on coming pre full moon day to offer Buddha.
subuueain February 1, 2012 at 3:13 AM
အကုန် စားချင်ပါတယ် :)
jasmine(တောင်ကြီး) February 1, 2012 at 4:07 AM
Aunty Oo February 1, 2012 at 4:21 AM
အားလုံးက စားချင်စရာတွေပါဘဲ။ချိစ် သိတ်ကြိုက်တယ်။ထမနဲ ထိုးထားတာလဲနှမ်းအနက်လေးနဲ.စားကောင်းမဲ့ပုံဘဲ။
ကောင်းမွန်ဝင်း February 1, 2012 at 4:46 AM
ဆန်ပြုတ်မကြိုက်ဘူးလား။ ကျွန်မကဆံပြုတ်ကြိုက်တယ်။ :D
မြတ်ကြည် February 1, 2012 at 4:56 AM
မြတ်ကြည်အတွက် မတ်ပဲကြော်နော်။ ပေါင်မုန့် ဘေးသား ချိစ်နဲ့ပြန်ဖုတ်နည်း ရရင် တင်ပေးနော် မမ။
mstint February 1, 2012 at 5:29 AM
နကိုယ်ထဲကအစားအသောက်ဆို'လာထား' ပဲ အိုင်အိုရာရေ။
Shinlay February 1, 2012 at 7:26 AM
ဆမူဆာ၊ ဆန်ပြုတ်၊ကြာဇ့ချက်၊ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲသုပ်.. ကြိုက်ပါတယ်။
Candy February 1, 2012 at 8:36 AM
ကန်ဒီနဲ့ မမတူနေပြန်ပြီ ကန်ဒီလည်း ကြက်ဥကို တမင်ဖောက်တာ.. ဟီး
သူများတွေက မပေါက်အောင် ကြော်တာ.. :P
ပါရမီဖြည့်ဖက်လေး February 1, 2012 at 7:00 PM
ထမနဲကိုအစားချင်ဆုံးပဲ။ မစားရတာကြာပြီ။ ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲလည်း ကြိုက်တယ်။
မီးမီးငယ် February 1, 2012 at 8:05 PM
Iora February 2, 2012 at 12:47 AM
ထမနဲပါဆယ်ဆွဲသွားလို့ ကျေးဇူးတင်တယ်နော်။း)
I will post about the baking (another/ah na thar)bread with egg and cheese for u, Kaung and Myatkyi Lay later. But u know my turtle run. :)I would like to have Htamane you are making too. :D I am sure it will be much much better than mine. I did not put coconut slice as I don't like it.
အကုန်စားသွားကွာ ဒါဆုို။း)
အကြိုက်ဆုံးကစစားသွားလေ။ ဒါမှသိပ်မကြိုက်တာတွေနဲ့ အရင်ဗုိုက်မတင်းသွားအောင်..း)
အုိုင်အိုရာလည်း ချိစ်ကြိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့ ချိစ်တွေကျ မကြိုက်ပြန်ဘူး။ မြန်မာပြည်ကနှမ်းမရှိတော့လို့ ဂျပန်ကလာတဲ့နှမ်းနက်ဘူးဝယ်ထားတာ။
ထမနဲထဲတော့လှပါတယ်။ လက်ဖက်နဲ့ စားတော့မဲမဲမဲမဲနဲ့ ပိုးကောင်တွေကျနေသလုိုဘဲ။း)
ထမနဲ နဲ့ ပေါင်မုန့် အနားသားဖုတ်နည်း တွေတင်ပေးမယ်နော်။ သိတဲ့အတုိုင်းလာမည်ကြာမည်နော်။
ဟုတ်တယ်ကောင်း..ကုိုယ်လေ ဆန်ပြုတ်ကို မကြိုက်တာများတယ်။ ဒီတခါဘဲအကြိုက်မတူတာရှိတယ်နော်ကောင်း။ ဆန်ပြုတ်စားချင်အောင်ဘေးကလိုက်ရတာကပိုများတယ်။ ရန်ကုန်မှာတုန်းကငယ်ငယ်တုန်းကဆုို ရွှေတိဂုံဘုရားသွားတုိုင်း ရေတာရှည်လမ်းက ဆန်ပြုတ်ဆုိုင်တွေကိုအကုိုတွေကခေါ်သွားပြီးစားနေကျ။ ဒါပေမဲ့တွဲစားတဲ့ဝက်ခေါင်းသုပ်တို့ ၊ ကြက်သားသုပ်တုို့ ၊ ဘဲသွေးသုပ်တုို့ ပါမှ။း) အမေကလည်းဆန်ပြုတ်အရမ်းကြိုက်တယ်။ အမေကလေဟာပြင်ဈေးတုို့ တရုပ်တန်းတုို့ ကငါးရံ့ ဆန်ပြုတ်တို့ ၊ဘဲသားဆန်ပြုတ်တုို့ သိပ်ကြိုက်တယ်။
မတ်ပဲက ရေးတာကျန်ခဲ့လို့ အဲဒါ ကုလားဆုိုင်ကရယ်ဒီမိတ်ကို ကြော်ထားတာ။(ပြန်ရေးထဲ့ထားတယ်နော်) ဒီမှာကုလားဆုိုင်ကလွယ်လွယ်ဝယ်ရတော့ကိုယ်တုိုင်မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့အိမ်မှာလုပ်စားလေ့ရှိတော့ လုပ်တတ်တယ်ထင်တာဘဲ။
ပေါင်မုန့် ဘေးသားလုပ်စားတာလည်းတင်ပေးမယ်နော်။ အဲလိုလုပ်စားပြီးကြိုက်သွားကတည်းက ပေါင်မုန့် ဘေးသားကျန်နေတာတွေလွှတ်မပစ်ရတော့ဘူး။း)
တကယ်တော့ကြုံရာရှိတာတွေလုပ်စားဖြစ်တာများပါတယ်။ မြန်မာစာတွေကတော့ဆန်ပြုတ်ကလွဲရင် စားချင်လို့ လုပ်စားဖြစ်ပါတယ်။
ကြာဆံချက်နဲ့ ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲသုပ်ကိုယ်လည်းကြိုက်တယ်။ စမူဆာကတော့ကုိုယ့်အကြိုက်ဆုိုကြိုက်တယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆုိုင်ကရောင်းတာတွေတော့မကြိုက်တာများတယ်။း)
ပေါက်မှာမစိုးရတော့ဘူးလေ။ မကောင်းဘူးလားး)စမူဆာကိုအိမ်လုပ်ဘဲကြိုက်တာများတယ်။ အပြင်က၀ယ်ရင် သုပ်စားပစ်တာများတယ်။
ထမနဲကြိုက်တယ်လား။ ဒီမှာလည်းကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လုပ်မှ စားရတာဆုိုတော့ ခဏခဏတော့မစားဖြစ်ပါဘူးလေ။
ဆန်စေ့ပျောက်အောင်ကြိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူ့ အလိုလို နူးမြေ့နေအောင်အကြာကြီးကြိုပါတယ်။ ခြေပြီးကြေတာကိုအမေကမကြိုက်လို့ ပါ။
ထိုင်းမှာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသွားတက်တုန်းက နေ့ တုိုင်းမနက်စာကို ဆန်ပြုတ်တုိုက်တယ်။ ပုံမှန်ကတော့ဂျင်းနဲ့ ကြက်ဥ။ ကျန်တာတွေကတော့ကြုံသလိုထဲ့ပေါ့။ ဂျင်းမထဲ့လို့ ယတွေကကိုယ့်ကို ခလေးလို့ စားကြတယ်။
ဘန်ကောက်မှာတုန်းက ဆန်ပြုတ်ကျတော့ ထမင်းစေ့တွေလိုဘဲ။ သိပ်မကြေဘူး။ ပုဇွန်တွေ ငါးဖတ်တွေ ငါးဖယ်တွေ အရွက်တွေပါတယ်။ ဒို့ ကအစုံမလုပ်တတ်ပါဘူး။ အိမ်မှာဆုိုအမတွေလုပ်တာများတယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာဆုိုရင်တော့ကုိုယ့်ဘာသာကိုယ်လုပ်ရမှ။ ဇွဲက။း)
မဒမ်ကိုး February 2, 2012 at 1:05 AM
အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် ဒီဘလော့လေးကိုသိပ်ချစ်မိပေမယ့် ၀ိတ်ချချင်တဲ့အချိန်မှာတော့ မလာချင်တာအမှန်ဘဲ လုပ်ပြထားသမျှ သွားရေတွေကျလွန်းလို့ပါ မမရယ်း(((
san htun February 2, 2012 at 4:16 PM
တော်တီယား ကျောင်းမှာလည်း ကျွှေးတယ်..တရုတ်ကောင်လေးတွေကတော့ ကြိုက်လို့ တဲ့..စန်းထွန်းကတော့ ကြိုက်ဝူး..မမအိုင်အိုရာ ပို့ စ်တွေ ဖတ်ရတာ ဗိုက်စာတယ်..ဘလော့ကြီးကို ကိုက်စားလို့ ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ...
ထမင်းလျှော့ပြီး ဟင်းများများစားလေနော်။ ဖိုင်ဘာများများစား။ အရွက်ဟင်းတွေ တို့ စရာတွေစားပေါ့နော်။း)
မက်ဆီကန်တော်တီးယာကို သူတို့ အဆာတွေထဲ့ထားတာတော့ တော်တော်များများစားဘူးသလောက်မကြိုက်ဘူးစန်းထွန်းလိုဘဲ။
ပဲတွေကလည်းပါသေး။ ဘူရိတုိုလို့ ခေါ်တယ်လေ။
တော်တီးယာ(နံပြားလိုဟာ)ကတော့ ကိုယ်ကြိုက်သလို မော်ဒီဖုိုင်းလုပ်စားရင် သိပ်မဆုိုးဘူးရယ်။
salsa ခရမ်းချဉ်သီးပန်ထွေဖျော်လိုဟာနဲ့ စားရတာတော့တော်တော်သဘောကျတယ်။ ဟီး..ဒါပေမဲ့ ကြော်ပြီးသားရယ်ဒီမိတ်အထုတ်ဝယ်မိရင်တော့နောင်တရတယ်။ တခါစားပြီးလုံးဝဆက်မစားချင်လို့ ။း))
Mon Petit Avatar February 3, 2012 at 6:43 AM
I love, love, love all of them. Oops, I did lie something, I don't like congee, it makes me lose appetite, hehe. Sorry about my comment if it upset you, sis.
Yay..I've got one vote for disliking congee.:p
Although I have modified it I still think it isa"lumamar sar".
Thanks for negatively voting congee that shows we have same taste. :D
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) February 8, 2012 at 9:39 AM
မုန့်တွေလည်း အမျိုးမျိုးဘဲ စိတ်ဝင်စားစရာကြီး
တစ်ချို့ဟာတွေများဆို စားတောင် မစားဖူးဘူး..
ချိစ်တွေ ထောပတ်တွေကြက်ဥတွေလဲ ကြိုက်တယ်ဆိုတော့လေ..
မြန်မာမုန့်တွေတော့ ပြောစရာမရှိဘူး.. ကြိုက်ပြီးသားဆိုတော့
မနက်စာတွေ တအားကောင်းတာဘဲ.. မနာလိုတော့ဘူးး)
ထမနဲလုပ်စားရတာပါ။ မလုပ်ရင်တော့ ဘယ်တော့မှမစားရဘူးလေ။း)
မုန့် တွေဘယ်စားဘူးမလဲ ကိုယ်စိတ်ထဲလုပ်ချင်သလိုလုပ်ထားတာကိုးချောရဲ့ ။
မြန်မာစာတွေကလွဲရင်ကျန်တာတွေ အများစုက စားချင်တာထက် ရှိတာကိုစားချင်အောင်လုပ်ဖြစ်လိုက်တာပါ။
အပြုံးပန်း February 22, 2012 at 5:06 AM
ဘရာကြော်လေး ပြင်ထားတာ သဘောကျလိုက်တာ၊